Mogadishu Journal » Barca waxay ku ciyaari doontaa garoonka Olympic Stadium halka Camp Nou lagu sameynayo dib u habayn
Barca waxay ku ciyaari doontaa garoonka Olympic Stadium halka Camp Nou lagu sameynayo dib u habayn
Barcelona ayaa ku ciyaari doonta garoonkeeda Olympic Stadium xilli ciyaareedka 2023-24 iyadoo dib u dhiska Camp Nou uu si xawli ah u socdo.
Shaqada casriyeynta ee guriga Barcelona ayaa bilaaban doonta dhamaadka xilli ciyaareedkan, sida la xaqiijiyay Khamiistii, iyada oo golaha magaalada Barcelona ay bixinayaan iftiinka cagaaran.
Shaqada ugu horreysa waxay diiradda saari doontaa heerarka koowaad iyo labaad ee garoonka, oo ay weheliso magaalooyinka dibadda iyo arrimaha sida horumarinta tignoolajiyada.
Burburinta heerka seddexaad ayaa dhici doona sanad ka dib, iyadoo la hubinayo in Barca ay si buuxda ugu shaqeyn karto kulamadeeda xilli ciyaareedka soo socda.
Madaxweynaha kooxda Joan Laporta ayaa sheegay in hubanti la'aanta qiimaha iyo helitaanka agabka ay sabab u tahay dagaalka Ukraine ay tahay in la tixgeliyo marka la qorsheynayo mashruuca, sidaa darteed Barca waxay dooratay inay yareyso khatarta ayna ilaaliso dakhliga xilli ciyaareedka soo socda iyadoo dib u dhigtay shaqada heerka seddexaad.
Iyadoo inta badan dib u dhiska uu dhacayo ololaha 2023-24, Blaugrana waxay ku ciyaari doontaa gurigeeda Montjuic halkii ay ku ciyaari lahayd Camp Nou, iyadoo u guuri doonta garoonkii udub dhexaad u ahaa Ciyaaraha Olombikada 1992. Garoonka Olympic Stadium waxa uu qaadi karaa ilaa 60,000 oo daawadayaal ah.
Barca ayaa awood u yeelan doonta inay ku ciyaarto Camp Nou xilli ciyaareedka 2024-25, laakiin awoodda ayaa la dhimi doonaa qiyaastii 50 boqolkiiba. Mashruuca dhismuhu waa in la dhammeeyaa inta lagu jiro ololaha 2025-26.
Barcelona ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri: “Kooxdu waxay haysataa maalgelin ay ku maalgeliso shaqadan, waxayna sii wadaysaa dadaalkeeda si loo xaqiijiyo hawlgalka guud ee maalgelinta guud ee ugu wanaagsan ee mashruuca Espai Barca lacag aan waligood ka badnayn 1.5 bilyan oo Yuuro, sida la ansixiyay. aqlabiyad weyn oo aftidii bishii December ee la soo dhaafay, oo ay sii ansixiyeen xubnaha ergada ee golaha ee qabsoomay 17 iyo 23 Oktoobar."
Doorashada Guddoomiye kuxigeenka koobaad ee Gollaha Shacabka oo bilaabatay
(Sawirro) Milateriga Ruushka oo duqeymihii ugu tirada badnaa ka geystay Ukraine